တရုတ်ပါတီ တစ်ခါသုံးစက္ကူပြား ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ | Chang Liang
Model Mပစ္စည်းများ Fအရွယ်အစား Unit စျေးနှုန်း $ MOQ
7 လက်မ 200-350 ဂရမ် 18cm 0.02-0.06 50000
8 လက်မ 250-350 ဂရမ် 20.5 စင်တီမီတာ 0.၀၃-၀.၀၆ 50000
9 လက်မ 300-400 ဂရမ် 23cm 0.၀၃-၀.၁ 50000
10 လက်မ 350-400 ဂရမ် 25.5 စင်တီမီတာ 0.04-0.15 50000
1၁လက်မ 400-560 ဂရမ် 28cm 0.၀၅-၀.၂ 50000
12 လက်မ 400-560 ဂရမ် 30.5 စင်တီမီတာ 0.၀၅-၀.၂ 50000
1. ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား၊ ပလပ်စတစ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ရောစပ်ထားသောကြောင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၏ အကြောင်းအရာများ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။
2. ကောင်းမွန်သော အရိပ်အာဝါသ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
ပါတီတိုင်း၊ ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေရှိပေမယ့် အများဆုံးကတော့ ငါတို့မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကစားရတာ၊ တခြားအရာတွေက သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒီနေ့ ပါတီပွဲရှိလား။ ခရစ္စမတ်ပါတီများ၊ အတန်းပါတီများ၊ ဘောလုံးပါတီများစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ခါသုံးပါတီစက္ကူပြားများ လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကိတ်မုန့်၊ ဒိန်ခဲ၊ သစ်သီးများ၊ ဘီစကွတ်များ၊ အလွန်အဆင်ပြေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော အခင်းအကျင်းစီးရီးများကို စက္ကူပြားများ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ပစ္စည်းမှာ အစားအစာတန်းစက္ကူ၊ 7/8/9/10/11/12 လက်မအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ဈေးလည်းမှန်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သည်များမဟုတ်ဘဲ စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှိုးပွဲစတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ယခင်- တစ်ခါသုံး စက္ကူ ညစာ ပန်းကန်များ
နောက်တစ်ခု: 250*330*400 တစ်ခါသုံး ဆေးရောင်စုံ လက်သုတ်ပုဝါ